बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै आममानिसको जीवनशैली पनि परिवर्तित छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको आधुनिक जीवनशैली ग्रामीण भेगमा पनि सर्दै गएको छ । यसै क्रममा फर्निचरजन्य उत्पादन पनि जीवनशैली बदल्ने मुख्य पाटो बनिरहेको छ । पुख्र्यौली शैलीका फर्निचरजन्य उत्पादन अहिले प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक फर्निचर उत्पादनका रूपमा परिणत हुँदै आएका छन् । यसलाई आम मानिसले महŒवका साथ जीवनशैली बदल्ने पाटोका रूपमा आत्मसात् गर्दैछन्, जसले फर्निचरका उत्पादनको बजार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्दै व्यवसायका साथै बजार विस्तारको लक्ष्यसहित बर्सेनि फर्निचरजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको व्यापक सक्रियतामा अहिले फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी भदौ २५ गतेदेखि फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स)– २०१९ आयोजना हुँदैछ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजना तथा इभेन्ट सोलुसनको व्यवस्थापनमा आयोजना हुन लागेको फर्नेक्सलाई सन्दर्भ बनाएर कारोबारले समेटेको सम्बद्ध पक्षका विचार :
विदेशी काठको गुणस्तर ज्यादै कमजोर
निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ
सातवटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेका छन् । यसपटक विगतको भन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु हुन्न भन्ने आवाज, बहस, अन्तरक्रिया भइरहेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, विज्ञ, सांसद तथा सरोकारवालाले विगतको कुपरम्परालाई तिलाञ्जली दिँदै यसपटक विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने आवाज मुखरित गरेका छन् । कुन विश्वविद्यालयमा को उपकुलपति बन्ला भन्ने अड्कालबाजीका बीच उपकुलपति चयनको विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, सक्षमतालगायतको विषयमा केन्द्रित बहसहरू पनि छेडिरहेका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक इतिहास बोकेका नेता हुन्— मोहनविक्रम सिंह । १९९२ सालमा जन्मिएका सिंह प्युठानका स्थायी बासिन्दा हुन् । २००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, आन्दोलन र संघर्षमा होमिँदै आएका सिंह तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिए र २००८ सालदेखि राजनीतिक खेमा परिवर्तन गरी निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् ।
अपवादलाई छाडेर भन्ने हो बहुसंख्यक नेपाली यतिबेला संघीय शासनको पक्षमा नै वकालत गर्छन् । दलीय प्रणालीमा आबद्ध भएका नेता, कार्यकर्ता, समर्थकहरू दल र नेताकै दर्शन, जीवन र आदेश शिरोपर गर्छन् र उनीहरू चाहेर-नचाहेर पनि यसको विरोध गर्न सक्दैनन् । क्रान्ति, आन्दोलन, त्याग र बलिदानीको जगमा उदाएको संघीय शासन–व्यवस्था संवैधानिक रूपमा भन्ने हो भने चारवर्षे अवधिमा छ र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अझै दुई वर्ष पुगेको छैन ।
खुला बजारको नीतिअनुसार बजारमा पाइने वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तरका आधारमा बजारले गर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका नाताले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात–निर्यातदेखि आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको पनि रहनु स्वाभाविक रहन्छ । तर, आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रणमा भने सरकारको भूमिका उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरूबीच एकीकरण प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । पार्टी एकीकरणपछिको समायोजन र अन्य पार्टीसँगको एकीकरण वार्ताहरूमा अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकीकरण विशेष चासोको विषय बनेको छ । वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले सदनलाई समाजवादी पार्टी नेपालको रूपमा जानकारी दिएपछि डा. भट्टराई प्रतिपक्षीको कित्ता छोडेर सत्तापक्षको कित्तामा बस्न थालेका छन् । ठीक यहीबेला राजपामा समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरणसम्बन्धी विवाद चर्किन थालेको र राजपाले वार्तासमिति नै भंग गर्नेसम्मका समाचार मिडियामा आएका छन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । एकातर्फ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने घोषणा गर्दै गर्दा ती पर्यटकका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार विस्तार भयो या भएन, मुख्य प्रश्न हो । त्यसो त सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । दुई वर्षको अन्तरालमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने चुनौती पनि छ । कतिपयले भ्रमण वर्ष घोषणालाई सरकारको महŒवाकांक्षी योजना भनिरहेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतको हिस्सा अग्रणी छ भने चीन र अमेरिकाबाट पनि पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ । हिजोका दिनमा नेपालमा पर्यटक सन्तोषजनक रूपमा आउने देशबाट अझ बढाउनुपर्ने र नयाँ क्षेत्रको खोजी पनि गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले नेपालमा पर्यटक आउन रुचाउँछन् पनि, तर ती पर्यटकका लागि उचित सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायी सुरज वैद्यलाई यस अभियानको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ ।
वीरगन्जको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परिचित नाममध्येका एक हरि गौतम पनि हुन् । खासगरी उद्योगको नीतिगत विषयमा बढी अनुभव बटुलेका गौतमको व्यावसायिक पृष्ठभूमि विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूमा पनि छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योगमा २०४९ सालदेखि ०५१ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गरे । २०५२ सालमा उनी सबैभन्दा पुरानो वीरगन्ज कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए । २०५३ सालदेखि २०६० सालसम्म दुईपटक महाप्रबन्धक र एकपटक अध्यक्ष गरी तीनपटक जनकपुर चुरोट कारखानाको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
नेपाल वन जंगलको धनी देश हो । यहाँ उत्पादन भएका विभिन्न वन पैदावार आर्थिक समृद्धिका स्रोत हुन् । यहाँका जैविक विविधतायुक्त ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । वन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट नै देशले प्रशस्त आर्थिक आयआर्जन वृद्धि गर्न सक्छ । नेपालको करिब ४४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि विडम्बनाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ कि हामी अझै काठ आयात गरिरहेका छौ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनका कारण राज्यले वन पैदावारबाट मुनाफा लिन सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै आएको छ । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य अकासिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पनि पर्न गएको छ । सुनको मूल्य एक्कासि बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा पर्न गएको हो । गत असार १० मा सुनको मूल्य बढेर ६५ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अहिले सुनको मूल्य बढेर तोलामा ७१ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य तोलामा झन्डै ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बढेपछि सुन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिमा बैंकहरूलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न कडाइ गरेपछि बैंकमार्फत बिमा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित भएका कम्पनीहरू झस्किएका छन् । बैंकास्योरेन्सको काम व्यवस्थित हुँदै धेरै अघि बढिसकेको अवस्थामा एक्कासि बन्दै गर्नु गलत भएको बताउँछन् एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम । विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित गरेर लानुपर्नेमा काटेरै फाल्ने काम गलत भएको र यसबाट बिमा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढे पनि बजारमा विस्तार नभएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको उनी स्वीकार गर्छन् । बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउनका लागि मर्जर आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी बिमा बजार विस्तारका लागि सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्दै सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नुपर्ने र न्यून आय भएका परिवारलाई बिमा गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेपछि बिमा व्यवसायमा प्रवेश गरिरहेका गौतमसँग बिमा व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :